Ny KDE haingana sy kanto | Avy amin'ny Linux
phico | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux
Na dia manakaiky aza ny famotsorana ny Debian 7, amin'ity lahatsoratra ity "Hanoro ny làlana izahay" mankany manangana tontolo birao mifototra amin'ny KDE amin'ny Debian Squeeze. Heveriko fa hahasoa azy io na dia ho an'ny tsimbadika manaraka aza, izay araka ny fanehoan-kevitra ao amin'ny Village WWW, dia tonga amin'ny alàlan'ny Xfce. Hodinihintsika manokana ireto lohahevitra manaraka ireto:
Ahoana ny fametrahana rafitra fototra ao amin'ny KDE?
Ahoana ny fomba hanafoanana ny serivisy ao amin'ny KDE?
Ahoana ny fomba hamaritana ny teny Espaniôla default?
Fandaharam-potoana natolotra ho an'ny KDE
Ahoana ny fampiraisana ireo rindranasa GTK ao amin'ny birao KDE?
Fitaovana fanodinana sy loharanom-pahalalana
Manomboka amin'ny fametrahana mahazatra izahay TSY MISY mametraka ny tontolon'ny sary. Mandritra ny fametrahana amin'ny fomba rehetra, na ny DVD voalohany na CD, tadidio foana ny hanesorana ny safidy "Tabilao birao graphique" amin'ny dinika Program Selection. Hanao Desktop KDE manokana izahay. Tsara kokoa sy mora kokoa hatrany ny manampy -install- noho ny mampihena fonosana -purge-.
Aorian'ny fanombohana voalohany dia tsy maintsy ataontsika ireto asa manaraka ireto:
Midira ho toy ny mpampiasa mahazatra izay nambaranay nandritra ny fametrahana azy.
Zahao ny anaran'ny mpampiantrano sy ny sehatra misy azy.
Ambarao ny toerana fitahirizana sahaza azy ary havaozy ny lisitry ny fonosana azo apetraka.
Ampidiro ary ampifanaraho ny "sudo".
Amboary ny haben'ny endri-tsoratra mandritra ny fanombohan'ny rafitra.
Apetraho ny rindranasa velona amin'ny maody console: mc "Midnight Commander", gpm "General Purpose Mouse interface" ary htop "Interactive Process Viewer".
Soso-kevitra: Raha mandritra ny fanombohana dia hitantsika fa maharitra maharitra ny fanombohana ny MTA na ny Mail Transport Agent "Exim" ary ny fanesorana azy dia tsara kokoa ny mametraka Ssmtp ary avelao ny rafitra hanala Exim amin'ny alàlan'ny baiko:
1 Ahoana ny fametrahana rafitra fototra ao amin'ny KDE?
2 Ahoana ny fomba hanafoanana ny serivisy ao amin'ny KDE?
3 Ahoana ny fomba hamaritana ny teny Espaniôla default?
4 Fandaharam-potoana natolotra ho an'ny KDE
5 Ahoana ny fampiraisana ireo rindranasa GTK ao amin'ny birao KDE?
6 Fanjifana harena tsy misy fitaovana
Apetraho ny fonosana kde-plasma-birao Fanombohana tsara io. Meta fonosana izay mametraka ny ivon'ny birao, ny kely indrindra amin'ny fampiharana fototra, ary ny tranomboky sy data. Anisan'ireo rindranasa hitantsika ny mpizaha tranonkala Konqueror, mpitantana rakitra Dolphin, tonian-dahatsoratra Kwrite, fikirakirana ny rafitra, tontonana sns. Miantso ny konsolan'ny KDE izahay amin'ny alàlan'ny baiko Nampahery.
Aorian'ny famerenana amin'ny laoniny dia efa manana tontolon'ny sary hiasa isika.
Raha te hitahiry loharano dia ajanontsika ny Fikarohana Desktop. Tsindrio ny kisary KDE Menu -> System Preferences -> Advanced -> Fikarohana Desktop, ary amin'ny endrika aseho dia esorinay ireo safidy "Alefaso ny fikarohana ao amin'ny birao Strigi"Ary"Alefaso ny birao semantika Nepomuk"
Avy eo, kitiho ny zana-tsipìka "Topimaso”, Miverina ao amin'ny kiheba izahay "Advanced" ary tsindrio ny kisary "Mpitantana serivisy".
Amin'ny endrika aseho dia mikaroka ao amin'ireo "Serivisy fanombohana" ilay atao hoe "Module fikarohana Nepomuk" ary hitantsika fa mandeha tsy ilaina izany. Hamafana ny safidy izahay "Mampiasà".
Somary midina kely ihany koa isika, mahita serivisy iray hafa izay azontsika atao disable raha tsy mametraka solosaina finday isika. Ny serivisy no tianay holazaina "PowerDevil". Koa satria mametraka solosaina finday aho dia avelako hody ary mandeha. Andao hojerentsika ny fomba hampihenana azy ireo amin'ny fipihana ny bokotra "Ampiharo", mijanona ny famonoana.
Atsaharo ny serivisy mampiasa tamba-jotra
Raha tsy miasa mifandraika amin'ny tamba-jotra isika dia afaka manafoana ireo serivisy mifandraika amin'ny tambajotra. Raha tsy mifandray amin'ny Internet isika ary tsy ilaina ny mamantatra hoe rahoviana ny Fanavaozana ny rafitra o Fanavaozana ny Notifier, azontsika atao ihany koa ny mampiato an'ity serivisy ity. Ny iray hafa azontsika ajanona dia ny Fanambarana habaka maimaim-poana. Azontsika atao foana ny mamerina ny serivisy amin'ny fanjakana niaviany.
Ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia ny fampihenana ny fanjifana ny enti-manana amin'ny lafiny fikirakirana, fahatsiarovana ary fidirana amin'ny kapila mafy. Na izany aza, afaka avelantsika izy ireo satria apetrakao default.
Faritanay fa ny fiteny default dia ny Espaniôla ary mifantina ny karazana endri-tsoratra sy ny habeny amin'ny alàlan'ny "Taratasy rafitra”. Ny fiarahana miasa amin'ireo Prefers ireo dia tena intuitive sy mora. Hanitatra izahay raha miresaka teboka mitsikera.
Ambarao ilay fiteny
Mba hanambarana ilay fiteny dia mankany KDE Menu -> Preferansa Sietma -> Faritra sy Fiteny, ary amin'ny endrika aseho, kitiho ny bokotra izay hiseho amin'ny teny Anglisy angamba ny lohateny "Manampy fiteny" ary manampy ny teny espaniola izahay. Ho an'ireo izay manoratra amin'ny teny anglisy dia mora ny manampy an'io fiteny io ary avy eo mampakatra ny Espaniôla amin'ny fiteny misy anao.
Rehefa avy nametraka ireo fonosana naroso rehetra dia mihatsara be ny fandikan-teny Espaniola. Manidy ny fivoriana izahay ary miditra indray. Toy izany koa, afaka manamboatra endrika maro hafa isika alohan'ny hanohizana ny fametrahana.
Synaptic, mpitantana fonosana sary; Deborphan, izay hanampy antsika-eo amin'ny lafiny hafa- hanafoanana ireo tranomboky kamboty mampiasa ny baiko kamboty kamboty; Gdebi-kde hametraka fonosana .deb alaina; rar y Miraisa:
Fanamarihana: vitsy dia vitsy ny baiko console izay tsy maintsy kasaintsika mba hananana tontolo iainana ifotony. Ny mpitantana nampiasaina tamin'ny KDE 3.xxx dia Adept. Amin'izao fotoana izao ny kinova hitany tao amin'ny Ubuntu Lucid sy Maverick dia Betas. Ny fametahana dia tsy mitondra izany ao amin'ny trano firaketana lehibe, izay ireo no fananako. Tiako ary atoroko ho mpitantana fonosana sary i Synaptic. Manomboka izao dia azonao atao ny mampiasa ity programa misy sary ity hametrahana ny sisa amin'ireo fonosana. Ny "bika" dia tsy ho tsara tarehy raha tsy ataonao izay voalaza ao Ahoana ny fampiraisana ireo rindranasa GTK ao amin'ny birao KDE?
Kde-standard; Lohahevitra sy kisary fanampiny amin'ny birao; Mahazoa a "Jereo" mifanaraka amin'ny fampiharana KDE sy GTK +; malagasy myspell-it:
Jereo ny fisie SWF miaraka amin'i Konqueror:
Office Suite, izay mety ho KOffice na OpenOffice o LibreOffice; Okular-extra-backend hijerena antontan-taratasy .chm sy endrika hafa; digiKam amin'ny fitantanana sary sy sary:
Soso-kevitra: Raha hametraka OpenoOffice amin'ny tsindry 64-bit ianao dia ampirisihiko hametraka ilay fonosana aloha tzdata-java o "Time Zone Java" ary ekeo ny vahaolana naroson'ny aptitude hampihena ny tzdata napetraka.
zavakanto, rafitra audio ofisialy ho an'ny KDE; Amarok, raha ny hevitro ny mpitantana tsara indrindra - mpilalao mozika; K3b, koa, ary raha ny hevitro, ny programa tsara indrindra handoroana; Vlc; kdemultimedia, modely ofisialy KDE (ny Juk dia mpilalao mozika efa hapetraka):
Soso-kevitra: Atombohy ny VlC. Mandeha Menu -> Fitaovana -> Préférences -> Audio -> Module Output, ary safidio "Output audio UNIX OSS" mba hiasa tsara miaraka zavakanto. Azonao atao ihany koa ny mankany Fitaovana -> Preferensi -> Video -> Output ary misafidy "Video output X11 (XCB)"
Krfb: fampiasana hizara ny birao amin'ny alàlan'ny VNC.
Yakuake- Console azo averina ho an'ireo tia konsoly toa ahy.
Krusader: mpitantana fisie roa-pane - karazana komandà - tena ilaina. Manoro hevitra ny hametraka ireo fitaovana alohan'ny Krusader aho kdiff3: mampitaha ary mampifangaro rakitra na lahatahiry 2 na 3; krename: manova anarana ny rakitra; sy compresseur lzma, lha, ary arj.
System-config-mpanonta-kde y Printer-applet: Fampiasana handrindra ireo mpanonta sy applet hitantanana ireo asa fanontana.
Firefox: Tsy ilaina ny fampidirana. Sintomy ny .tar.gz avy amin'ny Firefoxmanía, esory ao anaty fampirimana izany ary ampiasao!. Ankehitriny, ny fanambaràna azy ho navigateur default ary fampidirana azy ao anaty rafitra dia tantara hafa. Azon'izy ireo atao koa ny mametraka ny Iceweasel ireo izay tsy tia an'i Konqueror.
GIMP: Fandaharana manodinkodina sary.
Hatreto dia manana birao kanto miaraka amina fampiharana marobe izahay hanombohana miasa sy / na mankafy. Miaraka amin'ny KDE4 dia heveriko fa nisy zavatra nitovy tamin'izay nitranga tamin'ny GNOME3. Betsaka amintsika no nanao fandavana mafy tamin'ny voalohany. Izaho manokana dia mampiasa GNOME 2.30.02 izay ilay miaraka amin'ny Squeeze amin'ny alàlan'ny default. Nampiasa KDE niaraka tamin'i Etch sy Lenny nandritra ny fotoana ela aho. Rehefa nahita ny KDE4 voalohany aho dia nolaviko avy hatrany. Fa satria henoko be loatra ny dera noho ity Desktop ity dia nanapa-kevitra ny hametraka azy aho ary hizaha azy amin'ny solosaina findainy ary ny marina dia mety amiko. Ny fanovana ataoko dia ny Menu amin'ny fomba mahazatra na taloha, ary manokatra fisie miaraka amin'ny tsindry indroa.
Mampiasa ny style windows QtCurve omen'ny fonosana ahy aho qtcurve, ary amin'ny alàlan'ny fonosana kde-config-gtk-style ary ny System Prefers, amboariko ny fomban'ny rindran-damina GTK hahazoana “fijery” mitovy amin'ny tontolo iainana iray manontolo. Azontsika atao koa ny mametraka ny fonosana gtk-qt-maotera ary safidio ny fomba QT 4, ankoatry ny hafa. Ny fandaminana ny fisehon'ireo rindranasa ireo dia vita amin'ny alàlan'ny KDE Menu -> System Preferences -> Fisehoana -> Fomban'ny GTK sy endritsoratra.
Mikasika ny fanjifana loharanon-karena, raha tsy ampandehanana ny "Composition" (Composer, Compiz) tafiditra ao amin'ny birao, dia mihena hatrany ny fanjifana RAM. Ary hoy aho hoe "ambany" satria ity tontolo birao ity dia tokony ho an'ny solosaina antonony. Raha mampavitrika ny Composition aho dia mihabe izany, fa manatsara ny tontolo iainana. Rehefa misafidy ny Composition, raha tsy manaiky ny fanitarana OpenGL ny karatra horonantsarinay, ao amin'ny “Advanced"an'ny"avoaky", Azontsika atao ny misafidy ny karazana firafitra"XRender"ary andramo. Ny fanjifana dia miova arakaraka ny fitaovana ananantsika; raha mametraka ny distro 64-bit sns isika.
Azontsika atao ny manamboatra ny KDE bebe kokoa - indrindra hatramin'ny fahaverezana- indrindra momba ny fisehoana sy ny fametrahana fonosana na fampiharana hafa. Raha te hijery ny KDE iray manontolo ianao dia apetraho ilay fonosana kde-feno. Raha te handeha tsikelikely ianao dia jereo ireo fonosana meta:
kdeadmin: fitaovana ho an'ny fitantanana ny rafitra.
kdegraphics: fampiharana sary.
kdeedu: fampiharana fampiharana.
kdenetwork: fampiharana ho an'ny tamba-jotra.
kdeutils: fitaovana ampiasaina amin'ny ankapobeny.
kdepim: Fitantanana fampahalalana manokana, na fangatahana fitantanana ny mombamomba anao manokana.
kdesdk: Kit fampandrosoana ny lozisialy, na kit ho fampandrosoana ny rindranasa.
kdetoys: "Kilalao" ho an'ny Desktop.
kdewebdev: Fanangonana ny rindranasa ho an'ny fampandrosoana web.
koffice: efitrano fiasan'ny birao.
qt4-mpamorona: Betsaka ny olona mieritreritra fa ny KDE no Desktop tsara indrindra ho an'ny fandaharana. Qt4 dia Framework ho an'ny fampandrosoana ny fampiharana cross-platform, mampiasa C ++ na fiteny hafa toa ny Python. Ny tena mampiavaka azy dia ny fanangonana "widgets" marobe ho an'ny famolavolana ny Graphical User Interfaces na GUI.
kde-feno, ankoatry ny fonosana meta voalaza etsy ambony, dia miankina amin'ny kde-plasma-birao. Etsy ankilany, afaka mametraka rindranasa GNOME na olon-kafa isika mba hampanan-karena bebe kokoa ny birao.
Ny fomban'ny menio amin'ny alàlan'ny default, azontsika atao ny manova azy amin'ny fomba mahazatra na taloha amin'ny fipihana tsara amin'ny kisary ary fisafidiananaMivadika amin'ny fomba mahazatra ...”. Afaka miverina amin'ny fomba mitovy amin'ny fomba "Fanombohana”. Azontsika atao ny manamboatra izay tiantsika rehetra. Ary satria anjaranao manokana izany, izay mety hibahana boky misy pejy sy sary maro, dia avelako ho anao. :-)
Azafady mba manatona ny Fanampiana lehibe sy amin'ny antsipiriany izay entin'i KDE, ary antenaiko fa mankafizinao ity birao mirindra sy haingana ity.
Ny mampiavaka ny solosaina findainy?
Fujitsu LifeBook; Intel (R) Core (TM) CPU Duo 2; T5250 @ 1.50GHz; ; haben'ny cache: 2048 KB; RAM: 2003 KB
Fanjifana harena tsy misy fitaovana
Ny fizarana manaraka: Ahoana ny fanamboarana ny KDM?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ny KDE haingana sy kanto
NY GENERALA dia hoy izy:
arahabaina, eto amin'ny Internet isika. miarahaba anao, mirary soa ary handroso na Linux na Windows ary inona ny Ibuntu
ho ahy dia mbola sinoa ...
Valiny amin'i LA GENERALA
Ao amin'ny pc hafa ve ianao sa mampiasa Vista sy IE ???
azonao atao ve ny manome lesona momba ny fomba handaozana ny hareza qt izay plisssssssss tsara
Nitovy ny eritreritro 😀
Wow, raha te hiverina any Debian ianao, saingy mandeha tsara i Ubuntu.
Ahoana ny fomba hametrahako ny firefox 32 amin'ny debian?
Misintona ny tara aho, mametraka azy ao / opt, ary mampifandray amin'ny / usr / bin, fa tsy hisokatra izy io.
Aorian'ny fametrahana ny rafitra fototra, manao fanavaozana dpkg –add-architecture i386 && aptitude aho
Maninona ianao no tsy manandrana fa mahay fotsiny ny sudo firefox, tokony ho mora kokoa noho ny mitady ny tara izany, raha tsy tianao izany satria efa lany andro ilay kinova (izay tsy tiako ny momba ny debian) andramo tadiavina ao repositories hafa hanana ny ankehitriny
Tsy ao amin'ny toeranao firefox firefox fa misy iceweacel.
Mampiasà debian 64
Mametraka ireo tranomboky 32 ve ianao? xulrunner sns?
azonao jerena ve ity rohy manaraka ity, arahabaona
Lahatsoratra tena tsara, antenaina fa tonga haingana i Debian 7.
Eto amin'ity pejy ity no misy banga tsy hita hamoahana an'i Wheezy, androany dia nilaza ny 25 fa misy bibikely 52 ny manitsy. (antsasaky ny herinandro lasa) Noho izany dia mandeha tanteraka isika.
Tutto mahafatifaty. Ny tena marina dia nahazo tany marobe ny KDE, manana izany ao amin'ny Chakra aho ary miasa tsara amin'ny Sempron 2.1Hz (na dia manomboka be aza ny faniriana).
Saingy amin'ny herinandro dia manomboka miverina any Gnome aho mba hizaha toetra ny fandrosoana vitako hatramin'ny nametrahako azy tao amin'ilay kinova hafahafa 3.0
Manana Chakra aho amin'ny Sempron 2.7 GHz sy ondrilahy 3 Gigs ary marina fa maharitra fotoana fohy vao manomboka nefa mandeha tsara, rehefa nametraka azy aho dia nieritreritra fa ho fano. Atsaharo izao ny Nepomuk, andao jerena ..
TENA TSARA TSARA i KDE, ho an'ny solosaina manana loharano sy loharano ambany (Raha tsy hihoatra ny rano), saingy araka ny filazan'izy ireo dia mamela zavatra betsaka ny boot Fa manantena aho fa amin'ny ho avy tsy lavitra dia ho maivana kokoa ny boot (Azafady)
Faly aho amin'ny openSUSE 12.3 fa tena hanandrana an'i Debian 7 aho, na amin'ny milina virtoaly. Mazava ho azy miaraka amin'ny KDE eo ambony xD Manontany tena aho raha misy fomba hametrahana ny KDE 4.10 eo ambonin'ny Wheezy.
Ho hitanao miaraka amin'i Tanglu izany.
Afaka manangona foana ianao https://blog.desdelinux.net/contruye-tu-propio-kde-guiandote-por-estos-videos/
Fanontaniana ho anao izay mampiasa KDE:
Ny fotoana nanandramako ny KDE (miaraka amin'ny XFCE dia tonga amiko koa) amin'ny solosaina finday, rehefa mampifandray monitor ianao dia mila manamboatra ny efijery isaky ny manapaka ny monitor ianao, dia manohy mankany amin'ny biraonao ilay mpanondro. dia tsy mifandray intsony, azoko fa tsy manamarika fa tapaka izany.
Fantatro fa manao izany ho azy ny Unity, mamonjy ny toerana, ny famahana ny monitor ary isaky ny mampifandray ny zava-drehetra ianao dia napetrakao voalohany.
Tsy tiako ny Gnome na ny Unity, saingy toa mavesatra be ny manodidina ny xrandr, izay tsy mahazo aina indrindra fantatro ...
Raha misy mahalala vahaolana dia mba lazao ahy !! Miakatra amin'ny ***** an'ny Gnome 3 😡 aho
Valiny ho an'ny Supreme
Ao amin'ny efijery fanomanana monitor azonao atao ny misafidy ny hitahiry ny fisehosehoana ankehitriny ho default.
Misaotra tuto tsara
Miala tsiny, fa tsy ho mora kokoa ve ny mampiasa rcconf ary manafoana ny daemon exim amin'ny boot?
Raha miresaka momba ny KDE ... raha ny fahitako azy dia io no birao matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao UNIX, raha mitady fampidirana tonga lafatra amin'ny LibreOffice ao amin'ny KDE ianao dia manoro hevitra ity lahatsoratra ity ===> http://www.ubuntu-es.org/node/162953 (Ny hevitra fahatelo dia ny tena vahaolana) Raha ny hevitro dia izao no vahaolana farany amin'ny fampidirana LibreOffice ao amin'ny KDE.
Fanamarihana faharoa, ity ny faharoa fa tsy ny fahatelo (tsy misy ny fahatelo), diso aho: S
Mba hampifangaroana ara-maso an'i Firefox amin'ny KDE dia tokony hampiasa ny lohahevitra Oxygen KDE aho:
Ao anatin'ny lohahevitra iray ihany, ny fampidirana sary ny fampiharana GTK ao amin'ny KDE, dia ampirisihiko hametraka ny configurator KDE GTK:
Na dia tetik'asa ofisialy KDE aza izy io, dia toa mbola tsy tonga io rindrambaiko io, amin'ny alalàn'ny toerana misy anao, amin'ny fametrahana faran'ny KDE amin'ny distro rehetra.
Ny ataon'ny KDE GTK Configurator dia manampy modely amin'ny fikirakirana KDE, izay ahafahanao mametraka sy misafidy lohahevitra GTK ho an'ireo rindranasa miaraka amina interface toy izany, izay mihodina ao anatin'ny KDE. Raha vantany vao tafapetraka ny maodilo, raha te hiditra ao aminy dia mankanesa ao amin'ny: System Prefers> Appearance App> GTK Configuration
Saingy araka ny fiheveranao azy, ny KDE GTK Configurator dia tsy ampiasaina firy raha tsy manana lohahevitra GTK izay mifanaraka amin'ny fomban'ny KDE isika. Izany no antony anolorako hevitra ny hametrahana Oxygen GTK:
Ity lohahevitra ity dia "klone" GTK an'ny lohahevitra KDE Oxygen. Tetikasa ofisialin'ny ekipa KDE ihany koa io saingy mbola tsy nampiana an-tsokosoko ho an'ny KDE (toa ny mpanamboatra KDE GTK)
Ary farany, ary eo amin'ny sehatry ny fampidirana maso ny fampiharana GTK ao amin'ny KDE, dia mamporisika anao ihany koa ny hametraka ireo kisary Oxigen GTK:
Ity dia lohahevitra kisary ho an'ny fampiharana GTK, miorina amin'ny lohahevitra KDE Oxygen. Raha vantany vao napetraka izy ireo dia azony atao ny misafidy azy hampiasaina amin'ny KDE GTK Configurator, toy ny lohahevitra Oxygen GTK
Miaraka amin'izany ny fisoratana anarana GTK ao amin'ny KDE dia ho tsara tarehy.
Mamaly an'i gatoso
Gatoso, ao amin'ny Firefox dia azonao atao koa ny mametraka ny extension izay tsy mampandeha ny fanamarinana mifanentana ary avy eo mametraka ny lohahevitra tianao indrindra (ho ahy, ohatra, tiako ny fomban'ny Strata ary mifangaro tsara izy ireo):
Ho an'ny fikirakirana programa GTK hafa rehetra, farafaharatsiny ao amin'ny PCLinuxOS miaraka amin'ny KDE, dia mety tsara ny lxappearance (natao hamboarina ny rindranasa GTK ao amin'ny LXDE, fa kosa ny any amin'ny KDE). Azonao atao ny manohina ny masontsivana rehetra, manomboka amin'ny litera, hatrany amin'ny sary masina.
Fampahatsiahivana farany. Ao amin'ny aMule dia azonao atao ny manova ny sary masina amin'ny preferences / interface ary apetraka ny Oxygen.
Miarahaba anao amin'ny lahatsoratra. Tena tsara!
Lahatsoratra tena tsara, toro-hevitra tena tsara ary ny zavatra rehetra!
Tena tsara, tsara ajjaa
Mortrel dia hoy izy:
Eny, miombon-kevitra amin'i Diego aho, hatreto, ny KDE tsara indrindra. Eny, tsy misy azo lazaina, lahatsoratra tena tsara, feno pitsopitsony ary misy toro-hevitra tsara 🙂
Valiny tamin'i Mortrel
Te hisaotra anao rehetra aho tamin'ny fanehoan-kevitra .. Matotra, misaotra betsaka 🙂